Esigodlweni Priory e Gatchina - kanjani lapho?
esigodlweni Priory e Gatchina - kuyinto isakhiwo esiyingqayizivele, kuphela okusele ezweni zemlebitnoe isakhiwo. Yakhelwe Order of Malta, isivele ngaphezu kwamakhulu amabili eminyaka, kuyinto pearl kweqiniso izakhiwo kanye uphawu Gatchina. Inzalo ubuchwepheshe of indalo yayo, kanye izimo ngaphansi angaphantsi ukwakhiwa, futhi ezinganekwaneni ezungeze isigodlo. Namuhla, kwenziwa indawo, futhi sakujabulela. Ake sithole ukuthi kwakungani yini umlando esigodlweni njengoba manje ukulithola.
Le nqaba lakhiwa ejwayelekile isitayela Russian bokwakha yesikhathi. Ukubukeka kufana iSonto sezindela ephakathi. Lokhu kunomthelela umbhoshongo, okuyinto ufana insimbi yesonto, kwaba nabantu bezizwe ezixubile jikelele futhi isici kuvulandi kocingo. Ingaphakathi le nqaba, njengoba kufanele Isigodlo ongcwele, olukhuni kakhulu. Futhi lokhu awasebenzi kuphela isitayela lapho yakhiwe izindonga nemibhoshongo, kodwa uhlelo lwemibala elula - Igumbi esimhlophe uphahla abomvu.
Nokho, esigodlweni wabheka ngikweluleke ukuba nesikhathi ukwakhiwa. vanes gilt nesiliva pudostskogo itshe, izindlela abomvu ansundu kanye white walls, izingongolo abamnyama kanye kocingo. Kukholakala ukuthi lokhu wezakhiwo lwemibala ephefumulelwe izingubo ezimhlophe futhi zibomvu Knights saseMelitha, kanye izembatho ezimnyama izindela.
Okwavelela Gatchina Palace wukuthi ngezindlela ezihlukahlukene kubukeka ezahlukene, it is hhayi eziphindaphindiwe.
Ngakho, kusukela eningizimu like indlwana Gothic, kanye enyakatho ingxenye uma ekhula masinyane emanzini. Uma ubheka le nqaba isuka kuleli chibi, kubonakala sengathi yayakhiwe esiqhingini. Nge lolu hlobo eyenziwa parallel Malta. Ukugcina odongeni ikwenze lokhu kubukeke njengothando inqaba, futhi isango layo elikhulu nge Priory Palace sifana izindlu zwe. Nokho, le nqaba ubukeka Akumangalisi okuqinile. Bright okwakhe asiqokomisa ngu nokwakheka asymmetry kuqashelwe yiwo wonke ososayensi abatadisha ke.
Nakuba Priory Palace hhayi ngakho pyshen, njengabanye izinqaba eziningi, kuleyo ndawo Petersburg, lokhu akusho inciphe ukubaluleka kwayo. Kuyinto kubangelwe ubunjalo isakhiwo. Iqiniso lokuthi lokhu isakhiwo kuphela okusele ezweni, wadala nge ubuchwepheshe zemlebita. Lokhu kusho ukuthi loam izingqimba uvalwe ohlangene, abangu afuthwe ngesibulali isixazululo of lime. Ngakho yayakhiwe izindonga esigodlweni nothango, kanye kwezinye zezakhiwo sise isakhiwo.
Ohlukile enqabeni itholakala lokuthi ukuthi, lakhiwa kusuka emhlabathini, wakwazi zimelele iminyaka cishe abangamakhulu amabili, ngaphandle kwesidingo umsebenzi wokuvuselela izakhiwo. Futhi ngisho manje uyaqhubeka bheka umxhwele, ngeqholo ukukhuluma ngokumelene isizinda Black Lake. By endleleni, ngenxa enqabeni ukwakhiwa ubuchwepheshe kwaba elinye igama - Earth.
Umlando Priory Palace has ngaphezu kwamakhulu amabili eminyaka. It yadalwa 1799 ngqo Order of Malta. Kunalokho, i-French e-Prince de Conde, owayeneminyaka ngaphambi Order.
Umlando kwasesigodlweni eduze ezihlangene ngayo izenzakalo ezenzeka eYurophu ekhulwini XVIII. The French Revolution yayibhubhisa kuya-oda. Ngokuhamba ke, walahlekelwa kakhulu ezweni. Russian Empire Sekuyisikhathi eside futhi zigcinwe eduze nobuhlobo obuhle ne Malta.
Ngakho-ke, Knights wacela usizo uPawulu mina, muva enyukela esihlalweni sobukhosi. Ngenxa yalokho, uMbusi evunyiwe isimo, "Grand Priory ka" Order of Malta. Lokhu kwenzeka ngo-1797. INgqungquthela Order lidlule Vorontsov Palace, elise-dolobha. Ngaphezu kwalokho, uPawulu I yayala ukwakha castle e Gatchina ukuze iSikhulu Conde, ngaleso sikhathi owayese ekudingisweni.
Umakhi we Priory Palace - Nikolai eLvov. Wazibonakalisa enhle kakhulu, hhayi kuphela kulo mkhakha, kodwa abanye abaningi, isibonelo, khona imbongi kakhulu, umculi. Izingonyama zatheleka banamakhono amaningi. Ngakho-ke, ngisho phakathi nesikhathi sokuphila kwakhe wabizwa Russian uLeonardo da Vinci. Imemori lokhu ndoda emangalisayo usaphila.
Wayephathiswe ukwakhiwa isigodlo kuya-oda. UNikolai eLvov uye walungisa imisebenzi eminingana, futhi ngaphambi kokuqala ekwakhiweni kwezakhiwo ezimbalwa esakhiwe phezu ubuchwepheshe obufanayo lapho esigodlweni Yakhiwa kamuva. Umqondo umakhi kwaba stylistically efana ephakathi izinqaba Swiss, kodwa akunakusetshenziswa akazange ukuzilingisa. Laqala ukwakhiwa ngo-1797. Lesi sigodlo Yakhiwa ngokushesha kakhulu. Kakade eminyakeni emibili ngemuva kokuqala ukwakhiwa ke wachitha umsebenzi igcwaliswe futhi yasendlini kokuqeda. Ehlobo lika-1799 lwalumumethe ukubukwa Ephakeme isigodlo kanye ne-transmission yayo Order. Ngakho uPawulu mina njengoba Grand Master futhi kwaba umnikazi enqabeni.
I okunye isiphetho esigodlweni
Kamuva - phakathi nokubusa koMbusi u-Alexander I - Priory Palace etandleni yengcebo. Khona-ke cishe akazange asebenzise. Esigodlweni eko XIX leminyaka, wayedlala indima yebandla lamaLuthela. Ekupheleni kwekhulu kwakuhloselwe facelift eningi. Le nqaba wahlela ohlelweni amanzi nendle, kwagcizelela isakhiwo futhi kwaguqulwa noma kungathiwa kanyekanye abantu, anamanci mahlanu. Ngakho, kungenzeka ukunikeza egumbini enkantolo ukuze uhlale.
Priory e zenzeka ekhulwini lamashumi amabili
Kusukela ekuqaleni kwekhulu leminyaka eledlule enqabeni waqala ukuqhuba izinkambo. Phakathi kweMpi Yezwe Yokuqala, Priory Sigodlo ekhatsi Gatchina elaba isibhedlela ngoba amasosha alimele. Kamuva, kwaku isikhungo ukuzijabulisa. Phakathi neMpi Yezwe II wasinda ngokuyisimangaliso, nakuba ezinye izakhiwo lalo kwabhujiswa ngokuphelele.
Engxenyeni kwekhulu lesibili ke kwaku House lokuqala Amaphayona, bese - National History Museum. Priory Palace waqala alulame in the 80s. Ukubuyiselwa eyathatha cishe iminyaka engamashumi amabili, futhi ngo-2004 enqabeni yakhoselisa for izinkambo.
Izinganekwane amaqiniso athakazelisayo
Mayelana Priory Palace hamba legends Amazing kakhulu. Komunye wayo, ngokwesibonelo, libhekisela khona kwesivisiso imfihlo ngomshoshaphansi. Ngokusho yetinsita ke uxhuma enqabeni ne Gatchina esigodlweni yasebukhosini. Kunzima ukusho ukuthi lokhu kunjalo, kodwa kubalulekile ukuba basho ukuthi uthathe leso sinyathelo ngempela eyatholakala ngokuhamba umsebenzi ekuqiniseni isisekelo. Wabeka khona ilitshe, nokufinyelela ukuphakama lokuqala cishe amabili amamitha, kancane kancane kuyancipha. Kodwa ngaphambi kokuphela kwalesi sinyathelo engakaze lidlule, ngakho injongo yayo ayihlonzekanga.
Kuvele isici esithakazelisayo esigodlweni ukuthi yayakhiwe ixhaphozi empeleni. It ukweleta omunye umcimbi ezenzeka ngesikhathi design. Okukhathazayo ukuthi ukwakhiwa enqabeni umsunguli UNikolai eLvov asithinte ngokuqondile kumbusi, futhi nomunye nabasizi bakhe - Lomshushisi Obolyaninovym. Wenqaba lapho izipesheli eziningana wezakhiwo eziphathelene esakhiweni. Khona-ke Lviv ahlinzekwa Obolyaninovu uqobo ukhethe indawo enikezwe esigodlweni izokwakhiwa.
SaseJudiya-jikelele bakhomba ixhaphozi eduze Black Lake - mhlawumbe alithandeki kakhulu futhi engafanele le njongo. Futhi umakhi wavumelana yini lesi sifo. Nokho, ukwakhiwa kwadingeka achithe umzamo okuningi nemali. Ngakho, kwakudinga ukwakha oluningi emiseleni ixhaphozi ezomile. Futhi egqumeni kwakhiwa kusukela umhlaba igodi, futhi lakhiwa Gatchina Priory Palace.
Isigodlo e art
Ubuhle engavamile enqabeni Sekuyisikhathi eside bakhangwa abadwebi. Eshukunyiswa ukubukwa emangalisa abaculi esigodlweni wafuna ukubonisa imidwebo yakhe. Ngezindlela eziningi, uthando enqabeni kwakubangelwa izici zayo sekushiwo - ngezindlela ezihlukahlukene kubukeka ehluke ngokuphelele.
Priory Palace ezithwetshulwe izithombe M. V Dobuzhinskogo, T. G. Shevchenko nezinye abadwebi ngakho waqamba nenkondlo kanye izimbongi.
Namuhla le nqaba ubukeka okufanayo njengoba kwakunjalo eminyakeni engamakhulu amabili edlule. Phakathi nesikhathi sokulungiswa kwesakhiwo libuyiselwe ngayo kuqala. Okwamanje, lapho aphethwe hambo ezithakazelisayo, okuyinto baziswa umlando isakhiwo. Futhi lo mbukiso ezithakazelisayo kakhulu ngakwesokudla kuyinto Priory kakhulu Palace. Kanjani ukuze uthole enqabeni, eyaziwa hhayi kuphela izakhamuzi Petersburg, kodwa kude futhi nangale.
Ngaphezu kwalokho, esigodlweni ngenkuthalo uvuselela isiko lasendulo. Omunye wabo avamile ekhonsathini kusihlwa e Chapel. umsindo Excellent, ukukhanya kanye Airy ikamelo kanye nokusebenza brilliant kukhanga abaningi abathandi bomculo hhayi kuphela. Futhi, Chapel enqabeni aphethwe ezihlukahlukene imikhosi, imihlangano, izinkondlo ukufundwa kanye amakhonsathi, izingqungquthela.
Indlela ukuya esigodlweni?
izivakashi abaningi bakhangwa izindonga zawo Priory Sigodlo ekhatsi Gatchina. Indlela uthole le nqaba futhi ujabulele leli gugu bokwakha? Kusukela Petersburg ukuba Gatchina engafinyelelwa ngesitimela nesitimela. Umgwaqo kuzothatha amahora mayelana nengxenye. Futhi, ukuze uthole Gatchina, futhi angasebenzisa Shuttle.
Edolobheni, ungacela noma izakhamuzi, okuyinto Priory Palace. Ikheli: Chkalov st, Priory Park, State Museum-Reserve "Gatchina". Futhi ukuze uthole enqabeni ungahamba futhi, ngesikhathi esifanayo ujabulele ukubukwa Amazing nxazonke.
Ngaleso sikhathi samanje esigodlweni udvweba uhambo ezithakazelisayo. Izivakashi ukutshela umlando Order of Malta kanye castle uqobo. Ngaphezu kwalokho, ungafunda okuningi mayelana nokwakhiwa zemlebitnoy ubunjiniyela, kanye bajwayelane umakhi UNikolai eLvov ubuntu.
Museum livulekele izivakashi nsuku zonke ngaphandle ngoLwesibili lokuqala lwenyanga ngayinye. Ukungena ku-Priory Ipaki khulula. By endleleni, le izoni oluhlaza sidalwe ngasekupheleni XVIII leminyaka ukuthuthukisa ubuhle enqabeni. Kamuva lapha waphula abaningi ebabazekayo ukuhamba izindlela, amachibi yokufakelwa futhi iziqhingi. Sekuyisikhathi eside Ipaki kube uya khona oluthandayo bendawo kanye Petersburg. Isigodlo Priory e Gatchina, izindleko ukuvakashelwa okuzoba engama-ruble angu-60 ukuya kwayi-120, uyonika ayilibala ngempela. Futhi lapha nakanjani ufuna ukubuya ngokuphindaphindiwe.
Isikhathi lapha siphela ehluke, emoyeni ephathelene nokuphatha izindela zangenkathi ephakathi. Ukuvakashela esigodlweni umbhoshongo, emadokodweni futhi izingadi ungakwazi ngempela bazizwe ekhumbulekayo umoya knight yokuvala.
Vikela nemvelo - izindlela ukuvikela impilo
Ukuzamazama komhlaba Underground e Bashkiria: izibalo, ukulinganisa lofakazi kanye nochwepheshe
Intuthu tube: isimo noma zempilo?
Umlingisi Kirill Zhandarov: yomlando wakhe, umndeni kanye ifilimu izindima
Rose Barcarolle: incazelo kanye izici isiko
Nitrite usawoti: yokusetshenziswa